६ राष्ट्रले किन तोडे कतारसँगको सम्बन्ध ? – Online National Network
६ राष्ट्रले किन तोडे कतारसँगको सम्बन्ध ?
२३ जेष्ठ २०७४, मंगलवार ०२:३०
काठमाडौं, २३ जेठ – मुस्लिम बहुल ६ वटा देशले सोमबार कतारसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध तोडेका छन् । आतंकवादलाई सघाएको र अरब क्षेत्रको शान्ति तथा अमनचैनमा समस्या ल्याएको आरोप लगाउँदै साउदी अरेबिया, बहराइन, संयुक्त अरब इमिरेट्स, यमन, लिबिया र इजिप्टले कतारसँगको आफ्ना सबै कूटनीतिक सम्बन्ध अन्त्य भएको घोषणा गरेका हुन् ।
यसैबीच, कतारले आतंकवाद वा इरानलाई सघाउने गरी आफ्नो मुलुकबाट कुनै पनि गतिविधि नभएको बताउँदै आफूमाथि लगाइएका सबै आरोपको खण्डन गरेको छ । सम्बन्धविच्छेद गराउनुको अर्थ कतारलाई अरूमाथि निर्भर बन्ने अवस्था सिर्जना गर्नु रहेको बताउँदै कतारी प्रशासनले आवश्यक पर्ने सबै उपाय अवलम्बन गरी अघि बढ्ने बताएको छ । कतारले आफ्नो समाज र अर्थतन्त्रलाई तहसनहस पार्ने षड्यन्त्रबाट अरब राष्ट्रहरूको पछिल्लो निर्णय आएको दाबी गरेको छ ।- अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिक